TANANAN’I SAMBAVA : Mikaikaika amin’ny fidangan’ny vidin-javatra ny mponina
Ankoatra ny fidangan’ny vidim-bary misy ao an-tampon-tanànan’i Sambava efa roa herinandro izay, dia manararaotra nampiakatra ny saran-dalana ihany koa ireo taksy-môtô ary tsy mandeha raha tsy feno efatra ireo mpandeha, raha ny loharanom-baovao. 17 mai 2017
Nampiakatra ny saran-dalany ihany koa ny zotra nasionaly mampitohy ny Sambava sy Antananarivo, raha toa ka 70 000 hatramin’ny 80 000 Ariary izany teo aloha dia niakatra ho 120 000 Ariary amin’izao, raha ny loharanom-baovao izay ihany.
Voalaza ihany koa fa afak’omaly teo niakatra ho 1900 Ariary ny kapoakan’ny vary any amin’ny Kaominina Amboangibe, ka 350 000 Ariary ny iray gony ny 60kg amin’izao. Voalaza fa io Kaominina io no tena misy vokatra lavanila, ka mahatonga ireo mpanjifa vary mampiakatra be ny vidiny izao. Efa nidina ho 800 Ariary kosa ny kapoaka ny vary raha ny ao an-tampon-tanànn’i Sambava, taorian’ny fidinana ifotony nataon’ireo mpiasa avy ao amin’ny sampany misahana ny varotra ny herinandro lasa teo, raha ny fanazavana azo avy any an-toerana.
Efa miparitaka amin’ireny mpivarotra vary ambogadiny ireny ireo vary 350 taonina izay nafarina, ka izany antony nampidina io vidim-bary io ao an-toerana. Ny tena mahatonga izao fidangany vidin’entana sy ny saran-dalana ao amin’ny Distrikan’i Sambava, efa misy ireo mpamboly lavanila mivarotra mialohan’ny fotoana, ka manararotra ireo mpivarotra madinika. Ahiana mbola hiakatra hatrany ny vidim-bary ao amin’ny Kaominina Amboangibe io, raha ny vaovao voaray avy any an-toerana. Mikaikaika, noho izany, ny ankamaroan’ny mponina ao Sambava satria tsy ny olona rehetra hoy izy ireo no hanam-bola ka hahavita hividy izany.